Theravada Buddhist Society of America - TBSA
ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ၁
အလှူဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ ၁
အလှူဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ ၂
ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ၃
အလှူဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ 1
The Theravada Buddhist Society of America (TBSA) was founded in 1980 to support the sasana activities in general and the Dhammananda Vihara activities in particular.
Click Here ~~ ကထိန်သင်္ကန်း~ အထွေထွေရံပုံငွေ~ Donations ~~ Click Here!
(Youtube Live )
Watch Live Link: tbsa.org/live
၂၀၂၀-ခုနှစ် ကထိန်ပွဲတော် နှိုးဆော်လွှာ
ဟပ်မွန်းဗေးမြို့, ဓမ္မာနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတော်၌ နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ယခုအချိန်တွင် လူစုလူဝေးလုပ်ခွင့် မရှိပါသေးသဖြင့် အကျဉ်းချုံ့ကာ နိုဝင်ဘာလ ၂၉-ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားပါမည်။
သို့ပါ၍ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းလိုသူများသည် မိသားစုအလိုက် ကျောင်းတော်သို့ လာရောက်၍ဖြစ်စေ၊ (Payable To: TBSA)ဟု Check ဖြင့်ရေးကာ စာတိုက်မှပို့၍ ဖြစ်စေ၊ TBSA ဝဘ်ဆိုဒ်(tbsa.org)မှ တဆင့်ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ လှူဒါန်းကြသော ကထိန်သင်္ကန်းများကို ပွဲတော်ရက်တွင် အလှူ့ရှင်များကိုယ်စား TBSA အမှုဆောင်များနှင့် ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့မှ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနား ပြုလုပ်နေစဉ် အလှူရှင်များ ကြည်ညိုဝမ်းမြောက်နိုင်စေရန် အတွက် Youtube Live မှ တိုက်ရိုက် လွှင့်ပေးသွားပါမည်။ သို့ပါသောကြောင့် တစ်နှစ် တစ်ခါ ရိုးရာမပျက် နိဗဒ္ဓကုသိုလ် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ကပ်‌ရောဂါများ ကြားမှပင် အလွတ်မခံပဲ ဆက်လက် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသေးကြောင်း ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှ လေးမြတ်စွာ တိုက်တွန်းနှိုး‌ဆော်အပ်ပါသည်။
(ကထိန်သင်္ကန်း တစ်စုံလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀-ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။)
အလှူ့ရှင်များ ကပ်ရောဂါဘေး ကင်းဝေးလို့ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။
ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျှင် ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
May all being be well, happy and peaceful. May all being be free from suffering and danger.
အားလုံးသောသတ္တဝါအပေါင်း ဘေးရန်ကင်းကွာ၊ ကျမ္မာရွှင်လန်းကြပါစေ။
သာဓုအနုမောဒနာ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆို၍ ဓမ္မာနန္ဒဝိဟာရ ‌ကျောင်းတော်ကြီး၏ အလှူဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများသို့ ဂုဏ်ပြုခြင်း
Please update your address to receive invitation and news letter. tbsa.org/myaddress
၂၀၂၀-ခု ကထိန်သင်္ကန်း အလှုရှင်များ
2020 © TBSA. designed by: felix